ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန - လမ်း
Demonstration of Cold milling machine & Road surface repair machine At 114 mile (Ygn-Mdy Expressway)
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော်နှင့် ဇနီး ပူတာအိုခရိုင်၊ နောင်မွန်းမြို့နယ်အနီး ကဆန်ခချောင်းပေါ်ရှိ ရပ်ဘော့တံတား (နောင်မွန်း)ဖွင့်ပွဲသို့ တက်ရောက် (13-1-2018)
ကိုရီးယား - မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး (ဒလ)တံတား တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးပါက တွေ့မြင်ရမည့် ပုံစံ
Monday, 15 January 2018 00:00	Written by Super User
131st Anniversary event highlight Video
အောင်မြေမန္တလာ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ စီမံကိန်း
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးကျော်လင်း သည် (၁၀-၁-၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမင်းထိန်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ညွှန်/မှူး ဦးသက်နိုင်၊ ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ နှင့်အတူ မန္တလေးမြို့၊ အောင်မြေမန္တလာ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ စီမံကိန်း တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းခွင်အား ကြည့်ရှုစစ်ဆေး။
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို (၉-၁-၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်၊ ရုံးအမှတ်(၁၁)၊ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စုဝေးခန်းမကြီး၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင်၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးကျော်လင်း၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးဝင်းတင့်၊ အဆောက်အဦ ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသိန်းဇော်၊ လမ်းဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးအုန်းလွင်၊ တံတားဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရွှေလေး၊ မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမင်းထိန်၊ ကျေးလက်လမ်း ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးခင်သက်၊ ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးဇော်မင်းသိမ်း၊ ဦးစီးဌာနများမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ အင်ဂျင်နီယာချုပ်များ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များမှ ဦးစီးဌာနများအလိုက် ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြပါသည်။
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သုဝဏ္ဏသင်တန်းကျောင်း၊ ရန်ကုန်မြို့ တွင် ကျေးလက်လမ်းဦးစီးဌာနက ဖွင့်လှစ်သည့် ကျေးလက်လမ်းတံတား တည်ဆောက်ခြင်း သင်တန်း (၈-၁-၂၀၁၈)
Published in	သင်တန်းအစီအစဉ်များ
Ceremony of Hand over China Aid Assembled Board Houses
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန နှင့် လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင် သည် Ceremony of Hand over China Aid Assembled Board Houses အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက် (၆-၁-၂၀၁၈)
ဒုတိယကြိမ် မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီ ဖွဲ့စည်းခြင်း အခမ်းအနား
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန နှင့် လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင် သည် ဒုတိယအကြိမ် မြန်မာနိင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီ ဖွဲ့စည်းခြင်း အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ (၇-၁-၂၀၁၈)
မန္တလေး-လားရှိုး-မူဆယ် ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု အသိပေးကြေညာချက်
(၁) ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လမ်းဦးစီးဌာန၊ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ ကျောက်မဲမြို့နယ်အတွင်း Oriental Highway Co.,Ltd. မှ B.O.T စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော မန္တလေး - လားရှိုး - မူဆယ် ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး မိုင်(၈၄/၁-၂) ကြားတွင် မန္တလေး မှ မူဆယ် သို့ ယာဉ်မောင်း ဦးစိုင်း မောင်းနှင်သည့် ဆီဘောက်ဆာ ယာဉ်အမှတ် (7H/7843)သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက် (၁၉၄၅)ချိန်တွင် ဂျွိုင်းပြတ်၍ လမ်းတစ်ခြမ်း ပိတ်ခဲ့ပြီး၊ (၁၂)ဘီးကားများထိ သွားလာ၍ ရကာ၊ ပိတ်ဆို့ယာဉ်အား ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက် (၂၁၀၀)ချိန်တွင် ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပြီးဖြစ်သောကြောင့် မော်တော်ယာဉ်များ ပုံမှန်အတိုင်း သွားလာလျက် ရှိပါသည်။
(၂) ၎င်းလမ်းအပိုင်း ကျောက်မဲမြို့နယ်အတွင်း မိုင်(၈၄/၄)အနီး မန္တလေး မှ မူဆယ် သို့ ယာဉ်မောင်း ဦးသန်းနိုင် မောင်းနှင်သည့် ဆန်တင်ဆောင်လာသော (၂၂)ဘီးတွဲကား ယာဉ်အမှတ် (7M/7497)သည် ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက် (၂၂၃၀)ချိန်တွင် ကရောင်းကြွေ၍ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု ဖြစ်ပွားကာ၊ လမ်းဦးစီးဌာနနှင့် Oriental Highway Co.,Ltd. မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ယာဉ်ထိန်းရဲ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပူးပေါင်း၍ လမ်းကြောင်းရှင်းလင်းရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက် (၁၃၀၀)ချိန်တွင် ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပြီးဖြစ်သောကြောင့် ယာဉ်များ အလှည့်ကျ စေလွှတ်လျက် ရှိပါသည်။
(၃) ယာဉ်လမ်းကြောင်း ရှင်းလင်းရေးအတွက် ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက် (၁၃၀၀)မှ (၁၈၀၀)ချိန်ထိ အဆင်းကားများကို လည်းကောင်း၊ (၁၈၀၀)ချိန်မှ (၂၄၀၀)ချိန်ထိ အတက်ကားများကို လည်းကောင်း တစ်လှည့်စီ စေလွှတ်လျက်ရှိရာ မိုင်(၈၇/၅)အနီး ယာဉ်များ ထိန်းသိမ်းမရဘဲ ခေါင်းချင်းဆိုင်၍ ယာဉ်ကြော(၄)တန်းအထိ ရှိကာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက် (၀၄၀၀)ချိန်တွင် လုံးဝ ပိတ်သွားခဲ့ပြီး၊ ကျောက်မဲဘက်ခြမ်းတွင် ဇီးပင်စခန်းရွာအထွက် မိုင်(၉၂/၅)အထိ (၅)မိုင်ခန့်နှင့် နောင်ချို ဘက်ခြမ်းတွင် နောင်ချို တိုးလ်ဂိတ်မှ ဂုတ်တွင်းလမ်း တစ်ပိုင်းလုံးနှင့် မိုင်(၈၇/၅)အထိ ယာဉ်များ ပိတ်ဆို့လျက် ရှိပါသည်။
(၄) ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု ဖြေရှင်းရန်အတွက် လားရှိုးအတက်ကားများကို နောင်ချိုနှင့် ၀က်ဝံ(ဘန့်ဘွေး) တိုးလ်ဂိတ်များမှ (၀၄၀၀)ချိန်တွင် လည်းကောင်း၊ မန္တလေး အဆင်းကားများကို ကျောက်မဲ၊ သီပေါ၊ ခေးနင်း၊ လားရှိုးမြို့ရှောင် တိုးလ်ဂိတ်များမှ (၀၇၀၀) ချိန်တွင် လည်းကောင်း၊ ယာဉ်သွားလာမှု ခေတ္တ ထိန်းထားခဲ့ရပါသည်။ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက် (၀၉၀၀)ချိန်ထိ ယာဉ်များ ပိတ်ဆို့လျက် ရှိပါသည်။
(၅) ဒု-ပြည်နယ်ထွေအုပ်(လားရှိုး)၊ ခရိုင်ထွေအုပ်(ကျောက်မဲ)၊ ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့(ကျောက်မဲ)၊ လမ်းဦးစီးဌာနနှင့် Oriental Highway Co.,Ltd. မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ နယ်မြေခံယာဉ်ထိန်း၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက် (၁၀၀၀)ချိန်တွင် ကျောက်မဲဘက်ခြမ်းရှိ ယာဉ်များအား လားရှိုးဘက်သို့ ဖြည်းဖြည်းချင်း စေလွှတ်ထားခဲ့ ပါသည်။ ဂုတ်တွင်းအပိုင်း ရှင်းလင်းသွားရန် ဂုတ်တွင်း အတွင်းပိုင်း ပိတ်မိနေသော ယာဉ်များအား ကျောက်မဲနှင့် နောင်ချိုဘက်များသို့ ရှင်းလင်းဆွဲထုတ်ကာ၊ အမှတ်(၂၀)ယာဉ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့ (လားရှိုး)မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်(၁+၆) အင်အားဖြည့်စေလွှတ်၍ လမ်းကြောင်းရှင်းလင်းရေး ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ နောင်ချို တိုးလ်ဂိတ်မှ လားရှိုးဘက်သို့ သွားမည့်ယာဉ်များအား ဆွဲထုတ်ရာ ရှင်းလင်းသွားပြီး ကျောက်မဲ ဘက်ခြမ်း ဂုတ်တွင်းတံတား မိုင်(၈၄/၀)မှ (၈၈/၀)ကြား မန္တလေးဘက်သို့ သွားရန် စောင့်ဆိုင်းနေသော ယာဉ်များအား (၁၃၃၀)ချိန်တွင် စတင်စေလွှတ်ခဲ့ပါသည်။
(၆) ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု ဖြေရှင်းရန်အတွက် အတက်/အဆင်း ကားများကို အလှည့်ကျ စေလွှတ် လျက်ရှိရာ ကျောက်မဲဘက်ခြမ်း၊ ဇီးပင်စခန်း မိုင်(၉၂/၀)မှ အဆင်းကားများကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက် (၁၅၀၀)ချိန်မှ (၁၈၃၀)ချိန်ထိ စေလွှတ်ရာ နောင်ချို တိုးလ်ဂိတ်သို့ နောက်ဆုံးကား (၂၁၄၀)ချိန် ရောက်ရှိပြီး၊ နောင်ချိုဘက်ခြမ်း နောင်ချိုတိုးလ်ဂိတ် မိုင်(၇၉/၀)မှ အတက်ကားများကို (၂၁၄၅)ချိန်မှ ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက် (၀၄၄၀)ချိန်ထိ စေလွှတ်ရာ မိုးမြင့်သာ မိုင်(၉၀/၀)သို့ နောက်ဆုံးကား (၀၆၄၀)ချိန် ရောက်ရှိပါသည်၊ ကျောက်မဲဘက်ခြမ်း မိုးမြင့်သာ မိုင်(၉၀/၀)မှ အဆင်းကားများကို (၀၆၄၅)ချိန်မှ (၁၂၀၀)ချိန်ထိ စေလွှတ်လျက် ရှိပါသည်၊ နောက်ဆုံးကား နောင်ချိုတိုးလ်ဂိတ်သို့ ရောက်ရှိပါက လားရှိုးဘက်သို့သွားမည့် အတက်ကားများအား အလှည့်ကျ ပြန်လည် စေလွှတ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
(၇) လမ်းဦးစီးဌာန၊ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)တွင် လက်ရှိအချိန်၌ မိုးရွာသွန်းလျက်ရှိပါသဖြင့် ဂုတ်တွင်းလမ်းပိုင်းတွင် လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှု မရှိစေရေး ကြိုတင်ကာကွယ်သည့် အနေဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက်နေ့တွင် အတက်ကားများကို (၁၅၀၀)ချိန်မှ (၂၀၀၀)ချိန်ထိ လည်းကောင်း၊ အဆင်းကားများကို (၂၂၀၀)ချိန်မှ (၀၄၀၀)ချိန်ထိ လည်းကောင်း အလှည့်ကျ စေလွှတ်လျက်ရှိပြီး ဇန်နဝါရီလ ၃ ရက်နေ့တွင် အတက်ကားများကို (၀၆၀၀)ချိန်မှ (၁၀၀၀)ချိန်ထိနှင့် (၁၈၀၀)ချိန်မှ (၂၂၀၀)ချိန်ထိ လည်းကောင်း၊ အဆင်းကားများကို (၁၂၀၀)ချိန်မှ (၁၆၀၀)ချိန်ထိနှင့် (၀၀၀၀)ချိန်မှ (၀၄၀၀)ချိန်ထိ အလှည့်ကျ စေလွှတ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
(၈) မန္တလေး - လားရှိုး - မူဆယ် လမ်းတွင် ယာဉ်မောင်းသူများအနေဖြင့် မိမိဆန္ဒအလျောက် စည်းကမ်းမဲ့စွာ ကျော်တက်မောင်းနှင်ခြင်းတို့ကြောင့် မတော်တဆမှုများ ဖြစ်ပွားကာ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုများ မဖြစ်ပွားစေရန် လမ်းဦးစီးဌာနမှ LED Board များ တပ်ဆင်ထားရှိပြီး သတိပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ ၎င်းလမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုများအား လျော့နည်းကျဆင်းသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဂုတ်ထိပ်တံတားသစ် တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းများကို ပြုလုပ်လျက် ရှိပါသည်။
ထားဝယ် နည်းပညာတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားအိပ်ဆောင် တည်ဆောက်ရေး
ထားဝယ်-မြိတ်လမ်း ရှိ ဝင်းဝတံတား တည်ဆောက်ရေး
အစ်အစ်ကျေးရွာ အဝင်လမ်း (၄/၅)မိုင် ဆောင်ရွက်မှု
တနင်္သာရီတံတား တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေး